काठमाडौँ — काठमाडौं । सरकारले फेरि पेट्रोलिय पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको छ । आइतबार नेपाल आयल निगमले विज्ञप्ति जारी गर्दै आइतबार राति १२ पछि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँले वृद्धि गरिएको छ । केही दिनअघि १७० रुपैयाँ पुर्याइएको पेट्रोलको भाउ अब १८० रुपैयाँ पुगेको छ भने डिजेल र मट्टितेलको भाउ १६३ रुपैयाँ पुर्याइएको छ । ह्वाई इन्धन (आन्तरिक) तर्फ प्रतिलिटर १६६ रुपैयाँ बढाइएको छ भने ह्वाई इन्धन (बाह्य) तर्फ १.५४५ यूएस डलर पुर्याइएको छ । यस्तै, एलपी ग्याँस प्रतिसिलिण्डर १ हजार ८ सय रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।
काठमाण्डाै – काठमाण्डौ महानगरपालिकामा उपमेयरको पदमा नेकपा एमालेकी उम्मेदवार सुनिता डंगोलको अग्रता कायमै छ । उहाँले २६ हजार आठ सय ८७ मतको अग्रता लिइरहनुभएको छ । अहिलेसम्म भएको गणनाअनुसार डंगोलले ४० हजार पाँच सय २४ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । गठबन्धनबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार रामेश्वर श्रेष्ठले १३ हजार ६ सय ३७ मत प्राप्त गरेर दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ ।यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवार बिनिता मगैयाले आठ हजार चार सय एक मत प्रप्त गरेर तेस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ। नुवाकोटका १७ उम्मेदवारको शुन्य मत – रामहरि न्यौपान त्रिशूली, ८ जेठ। स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा नुवाकोटका केही उम्मेदवारले शुन्य मतदेखि दोहोरो अंकको मत सङ्ख्यासमेत कटाउन सकेनन् । बैशाख ३० गते भएको निर्वाचनमा जिल्लामा ६६४ पदका लागि भएको निर्वाचनमा दुई हजार एक उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका थिए । जिल्
धरान उपमहानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार हर्क साम्पाङ विजयी भएका छन् । ४ हजार ६ सय मत गणना बाँकी छदै उनी मेयरमा विजयी भएका हुन् । धरानमा ६२८९८ मत खसेको थियोे । जस मध्ये ५८२७७ मत गणना भएको छ । अब गणना गर्न ४६२१ मत बाँकी छ । निकटतम प्रतिद्वन्दी किशाेर राईसँग ४१५९ मतले अगाडि छन् । लाैराे चुनाव चिन्ह लिएका स्वतन्त्र उम्मेदवार हर्क साम्पाङले १९१५५ मत पाएका छन् । साम्पाङ आफैंले पनि आफ्नो जित भएको उल्लेख गरेका छन् । अब धरानकाे खानेपानी र फाेहाेर मैला व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने उनले बताए । धरान उपमहानगरको उप-प्रमुखमा माओवादी उम्मेदवार अइन्द्र विक्रम बेघाले १८८६४ र एमाले उम्मेदवार पदम ईस्वोले १६५८१ मत पाएका छन् । हर्कले आफ्नो फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै भनेका छन् :- विजय जुलुस भोलि निकाल्ने कुरा गर्दैहुनुहुन्छ साथीहरुले ! खदा र माला लगाइदिनु पर्दैन मलाई ! अनावश
४० वर्षदेखि पाल्दै आएको टुप्पी जबर`जस्ती का`टिदिएको भन्दै एकजनाले प्रहरीमा उ`जुरी दिएका छन् ।विराटनर–१२ का ५२ वर्षीय मनोज शर्माले ४० वर्षदेखि पालिरहेको टुप्पी जबर`जस्ती काटि`दिएको भन्दै मोरङ प्रहरीमा उ`जुरी दिएका हुन् । उनले आफ्नो कम्मर`सम्मको एक फिट लामो टुप्पी कटहरी–४ का फिरोज मियाँले का`टिदिएको आरोप लगाएका छन् ।मियाँले गत १३ वैशाखको राति साढे ७ बजे कटहरी ४ मा टु`प्पीमा तानेर कैँचीले जबर`जस्ती का`टिदिएको शर्माले बताए । मियाँले आफ्नो बारीको पानी तान्ने पम्प चोरी गरेको रंगेहात फेला`पारेपछि प्रह`रीमा उजु`री दिएको तर फिर्तालिन द`वाव दिँदा नमानेपछि सोही रिसमा टुप्पी का`टिदिएको उनले बताए । यस्तो छ जान्नुहोस् टुप्पी पाल्नुको बैज्ञानिक कारण… हिन्दूका संस्कार अनुसार शिरको केन्द्र`स्थानमा नकाटी-नखौरी राखिने रौंलाई टुप्पी भनिन्छ । वैदिक परम्परा अनुसार कपाल काट्दा वा मुण्डन गर्दा मानिस`ह
आज श्री शाके १९४४ बि.स.२०७९ ज्येष्ठ ८ गते आइतबार इश्वी सन २०२२ मे २२ तारीख ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथी धनिष्ठा नक्षत्र ्रब्रह योग वव गर चन्द्रमा मकर राशिमा आनन्दादि योगमा मातंग योग नल नाम संवत्सर सुर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु, रविसप्तमीव्रत, अष्टमीब्रत अन्तर्राष्ट्रिय जैविक विविधता दिवस (ज्यो.प.सरोज घिमिरे) मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) सामान्य कार्य सम्पादनमा अधिक श्रम खर्चनु पर्नेछ साथै सामान्य अपजस खेप्नु पर्ला । पारीवारिक स्वास्थमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ । आफन्तजनको साथ सहयोगमा कमि आउनाले सामान्य मानसिक चिन्ताले सताउन सक्छ । भुमि तथा वाहन सम्बन्धी समस्याले सताउनेछ । बृष राशि (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) मित्रजनहरुको सहयोगमा अधुरा कार्य सम्पादन हुनेछन । भौतिक स्रोत साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहन सक्छ । आटँ शाहसको कमीले कार्यमा ब्यबधान आउला । प्रतिपक्क
काठमाडौं महानगरपालिकाको एक लाखभन्दा धेरै मत गनिसक्दा मेयर पदका स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले फराकिलो अग्रता कायमै राखेका छन्। आइतबार बिहानसम्म गणना भएको १ लाख ६ हजार ८५२ मत मध्ये शाहले ३८ हजार ३३३ मत पाएका छन्। यस्तै नेपाली कांग्रेसकी मेयर उम्मेदवार सिर्जना सिंह दोस्रो स्थानमा उक्लेकी छन्। यसअघि एमाले उम्मेदवार केशव स्थापित दोस्रो स्थानमा थिए। आइतबार बिहानसम्मको मतगणना अनुसार सिर्जनाले २१ हजार २९९ मत पाएकी छन्। त्यस्तै तेस्रो स्थानमा झरेका स्थापितको मत २१ हजार ८ छ। बालेन र सिर्जनाबीचको मतान्तर १७ हजार ३४ छ भने स्थापितसँग १७ हजार ३२५ छ। सिर्जना र स्थापितको मतान्तर २९१ मत छ। अहिलेसम्म वडा नम्बर १, २, ३, ४, ५, ६, ८, २७, २८, २९, ३०, ३१ र ३२ को मतगणना सकिसकेको छ। त्यस्तै अहिले वडा नम्बर ७, ९, १०, ११, १२, २३, २४, २५ र २६ को मतगणना राष्ट्रिय सभा गृहमा जारी छ। यीमध्ये वडा न
मेयर र उपमेयर दुवै पदमा महिला विजयी……
काठमाडौं, ७ जेठ । कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कांग्रेस र उपमेयरमा नेकपा एमालेका महिला उम्मेदवारहरु विजयी भएका छन् ।मेयरमा नेपाली कांग्रेसकी सुशीला शाही र उपमेयरमा एमालेकी जुना चौधरी विजयी भएका हुन् । कांग्रेसकी शाहीले १२ हजार ७१३ मत प्राप्त गरी मेयर पद जित्दा उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका महादेव बजगाईले १० हजार ४३५ मत मात्रै पाए । उपमेयरमा एमालेकी जुना चौधरी ११ हजार ७८ मत प्राप्त गर्दै विजयी हुँदा उनको निकटतम प्रतिस्पर्धी माओवादी केन्द्रकी जानकीकुमारी सिंहले ८ हजार ३०८ मत पाइन् । यो पनी...सुनसरी : सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा शनिबार दिउँसो एउटा अफवा फैलियो, ‘धरानको मेयरमा हर्क साम्पाङ’ विजयी भनेर। यसको ‘ट्रेन्डसेटर’ चाहिँ वैशाख ३० गते राति काठमाडौँको मतगणना सुरु नभई मेयरका उम्मेदवारको मत परिणाम सार्वजनिक गर्ने पात्र रहेछन्। उनकै फेसबुक पोस्टका आधारमा धेरैले ब
आज नेपाल पैसा पठाउँदै हुनुन्छ ? हेर्नुहोस यस्तो छ साउदी,कतार, मलेसिया लगायत देशको बिनिमय दर नेपाली रुपैया भन्नुको मतलव एक अमेरिक डलरको मुल्य नेपाली १०० रुपैया बरावर भन्ने बुझन्छ । नेपालमा विदेशी मुद्राको विनिमय दरको निर्धारण गर्दछ तथा विदेशी मुद्राको कारोबारको सुपरिवेक्षण “नेपाल राष्ट्र बैंक” पाल राष्ट्र बैंकले गर्दछ । विनिमय दर भन्नाले एउटा मुद्राको अर्को मुद्रामा गर्दा प्रयोग हुने दरलाई बुझाउँदछ । दुई मुद्रा विचको यस्तो दर हो जस अनुसार एक मुद्रा अर्कोमा साट्ने गरिन्छ अर्थात एउटा मुद्रालाई अर्को मुद्रामा साट्नको लागी प्रयोग गरिने दरलाई विनिमय दर भनिन्छ । उदाहरणको लागी नेपालमा अमेरिक डलको विनिमय दर १०० नेपाली रुपैया भन्नुको मतलव एक अमेरिक डलरको मुल्य नेपाली १०० रुपैया बरावर हुन्छ भन्ने बुझिन्छ । नेपालमा विदेशी मुद्राको विनिमय दरको निर्धारण गर्दछ तथा विदेशी मुद्राको कारोबारको सुपरि
काठमाडौँ — आठ वर्षअघि एक किशोरीलाई बला त्कार गरेको आरोप लागेका कन्सल्टेन्सी सञ्चालक मनोज पाण्डेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उनलाई प्रहरीले शनिबार दिउँसो काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको स्रोतले जानकारी दियो । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रहरी टोलीले शनिबार बिहानैदेखि उनलाई निगरानीमा राखेको थियो । उनी मोडल ग्लोबल भिसाज कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक हुन् । उनले आठ वर्षअघि मिस ग्लोबल इन्टरनेसनलमा भाग लिएकी १६ वर्षीया किशोरीलाई बला त्कार गरेको आरोप छ । युवतीले आफूमाथि ब लात्कार भएको भन्दै टिकटक भिडिओमार्फत् घटनाबारे सार्वजनिक गरेकी थिइन् । यो घटनाबारे संसदमा पनि कुरा उठेको थियो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले रूलिङ गर्दै घटनाको छानविन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन र दोषीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो ।